I-Little Bird Cottage kwiNtaba yeTamborine - I-Airbnb
I-Little Bird Cottage kwiNtaba yeTamborine
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMeredith
I-Little Bird Cottage ime kwindawo ezolileyo, yabucala yehlathi lemvula kwiNtaba yeTamborine. Umlingiswa wayo ngaphakathi nangaphandle lilizwe lesiFrentshi/lesiNgesi elinomoya wothando owongeziweyo oveliswe kukusetwa kwehlathi elizimeleyo.
Indawo ebalaseleyo yokuphumla kwaye ikumgama wokuhamba ukuya kwiGalari Walk, iiGadi zeBotanical, iiPaki zeSizwe kunye neendawo ezininzi zokutyela ezisemgangathweni. Ukwahlulwe yimithi ye-Rainforest evela kwindlu enkulu le ndlu ibonelela ngeendwendwe eziyimfihlo kunye nokuzola.
I-Little Bird Cottage yindawo yokuhlala yodwa engqongwe yimithi yehlathi elinemvula kunye nenani lemithi yeMacadamia ebonelela iindwendwe ngexesha elininzi lonyaka ithuba lokutya loo mandongomane amnandi. I-cottage inekhitshi eligcweleyo elinika iindwendwe ithuba lokonwabela ukutya okuphekwe ekhaya.
Le ndlwana ibekwe ngaphezu kwe-100m ukusuka endleleni kwaye ijikelezwe ziiPaki zeSizwe kunye nezokuSingqongileyo. Ngokwenene yindawo ekhethekileyo ebonelela ngamava awodwa okuzola kunye nokusondela kwimimangaliso yendalo yeTamborine Mountain. Igumbi lokulala lesibini elineebhedi ezimbini ezibekwe kakuhle kunye nesihlalo sebhentshi yefestile yongeza ngakumbi kumava akhethekileyo afunyenwe kule ndlu izimele.
Amagama amabini aqhele ukusetyenziswa ziindwendwe anoxolo kwaye aphumle.
4.99 · Izimvo eziyi-260
I-Little Bird Cottage iqhuba imigama ukuya kwiindawo ezibalulekileyo zeNtaba yeTamborine
- UkuHamba kweGalari. 1min
- Izitiya zeBotanical. 1min
- Iziko lelali ye-Eagle Heights 3 min
- Iziko lelali yaseTamborine Mountain 7min
- I-MacDonald Rainforest walk (uhambo olusondeleyo kwihlathi lemvula) 2min
Iindawo ezinika umdla zotyelelo eGold Coast
-Ilizwe leMovie 20min
- Ihlabathi loLwandle 35min
Umbuki zindwendwe ngu- Meredith
Iindwendwe zidla ngokudibana kamsinya emva kokufika ukuze kuqinisekiswe ukuba iindwendwe zikhululekile kwaye ziziva ziqinisekile ukuba zonke iimfuno zazo zendawo yokuhlala zanelisiwe ngokupheleleyo.
Olunye unxibelelwano ngo-Airbnb ukuze iindwendwe zifumane ngokupheleleyo ukuba neemfihlo nokuzola kwe-Little Bird Cottage.
Iindwendwe zidla ngokudibana kamsinya emva kokufika ukuze kuqinisekiswe ukuba iindwendwe zikhululekile kwaye ziziva ziqinisekile ukuba zonke iimfuno zazo zendawo yokuhlala zanelisi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tamborine Mountain